भारतमा जन्मेर नेपालमा सांसद र मन्त्री हुनेहरु यी हुन्, ? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/भारतमा जन्मेर नेपालमा सांसद र मन्त्री हुनेहरु यी हुन्, ?
भारतमा जन्मेर नेपालमा सांसद र मन्त्री हुनेहरु यी हुन्, ?
काठमाडौं । दक्षिण एसियाली देशमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने मामलामा नेपालको संविधान सबैभन्दा लचिलो छ । भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ बर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने कानुन छ । तर नेपालमा विवाह गर्नासाथ अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छ । जसका कारण नेपालीसँग विवाह गर्ने भारतीय चेलीहरुश नेपालको सांसद र मन्त्रीदेखि पार्टीको पदाधिकारीसम्म हुन सफल भएका छन् ।
अन्य राष्ट्रले आफ्ना नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेको निश्चित समयपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान राखेका छन्. । तर नेपालले विवाह गर्नासाथ विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छ । अगीकृत नागरिकता दिने निश्चित अवधि नराखे नेपाल फिजी हुनेछ ।
भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. राजीव गान्धीसँग ३०–३५ बर्षअअगाडि विवाह गरेर आएकी सोनिया गान्धीलाई इटलीमा जन्मेकै आधारमा प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकियो । तर नेपालमा विवाह गर्नासाथ अंगीकृत नागरिकता लिएका भारत माइती भएका सरिता गिरी, सीतादेवी यादव, रेणु यादव मन्त्री भइसकेका छन् । डिम्पलकुमारी झा प्रदेश २ को राज्यमन्त्री भइन् । यो खबर नेपाल फेसमा छ
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका भारतीय चेलीहरुले अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने प्रावधानले उनीहरु राजनीति गर्दै सांसद र मन्त्री भएका छन् । नेपालमा सांसद मन्त्री भएर नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतको हो भनेर खुलेआम बोल्ने गरेका छन् ।
यदि भारतको संसदमा आफ्नो भूभाग नेपाल वा चीनको हो भनेर बोलेको भए उत्तिखेरै सांसदबाट बर्खास्त गरी जेलमा कोचिन्थ्यो । तर नेपालमा खुलेआम नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतको हो भन्ने सरिता गिरीलाई अझै पनि छात्ती फुलाएर हिंड्ने छुट दिइएको छ । उनको माइती भारतको बिहार हो । उनी नेपालमा सांसद र श्रम मन्त्रीसमेत भइन् ।
श्रम मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार आरोपमा बर्खास्त भएकी थिइन् । र, रत्नपार्क शान्तिवाटिकामा अनसन बस्दा राति राति खाएको बिषय सार्वजनिक भएपछि अनसन नै त्यागेर अलप हुनुपरेको थियो । अहिले तिनै सरिता गिरी नेपाली भूभाग भारतको हो भनेर खुलेआम भनिरहेकी छन् ।
त्यस्तै भारतमा जन्मिएकी जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ रेणु यादव पंचायतकालदेखि नै राजनीतिमा उदाएकी छन् । उनी पटक पटक मन्त्री भइसकेकी छन् । हाल पनि उनी सांसद हुन् । उनको माइती बिहार मोतिहारी हो । नेपाली कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष सितादेवी यादवको माइती पनि भारत नै हो । उनी यसअघि शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री भइसकेकी छन् । हाल पनि उनी सांसद हुन् ।
त्यस्तै २ नम्बर प्रदेशकी जसपाकै सांसद डिम्पलकुमारी झाको माइती भारतको बिहार सितामढी हो । उनी केही महिनाअघिसम्म २ नम्बर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री थिइन् । भारतको दरभंगा माइती भएकी उषा यादव २ नम्बर प्रदेशकी अर्थराज्यमन्त्री हुन् । उनी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम(हाल जसपा)की सांसद हुन् ।
अघिल्लो संसदमा भारत माइती भएका आशा चतुर्वेदी, शैलकुमारी देवी महतो, फुलझरी देवी, माधवी साह सांसद थिए । त्यस्तै, दिपशिखा शर्मा र तेजमा आलम पनि सांसद भएका थिए । चतुर्वेदी मधेशी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक)बाट सांसद थिइन् । शैलकुमारी सद्भावना पार्टीबाट सांसद थिइन् ।
उनी तत्कालीन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोकी श्रीमती भएकै कारण सांसद भएको चर्चा पनि भएको थियो । किनकि २०७० मा महतो चुनावमा पराजीत भएका थिए । माधवी साह पनि सद्भावनाबाटै सांसद थिइन् । कलकत्ता माइती भएकी दिपशिखा शर्मा स्व. डा. धु्रव शर्माकी पत्नी हुन् । नेपाली कांग्रेसले उनलाई सांसद बनाएको थियो । चतुर्वेदी बिहारकी हुन् । शैलकुमारी बिहार सितामढीकी हुन् । साहको माइती मोतिहारी हो । मोतिहारीकी फुलझरीदेवी तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट सांसद भएकी थिइन् ।
कतारमा कामदारलाई कम्पनीले बोलाएर ‘इन्ड अफ सर्भिस’ भन्दै पत्रमा हस्ताक्षर गराउँदै
एमसिसीबारे देउवालाई रावलको जवाफ : ‘उहाँले त महाकाली सन्धि पनि छिटाे गराैँ भनेकै हाे’
आजदेखि सरकारी कार्यालय सञ्चालन हुने